Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara Sunflower - Ihe Bible Pụtara
otu esi ehichapụ ngwa na ipad nke na -ekwu na -eche
kedu ihe iphone m rapara na ihuenyo mmalite
iphone rapaara na ịgbanyụ ihuenyo
Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara Sunflower
Biblical Meaning Sunflower
Ihe Bible pụtara nke sunflower
Sunflowers pụtara .Ọ bụ omenala ndị okpukpe Dutch inwe foto na akwụkwọ nwere eserese ihe atụ nke na -ezo aka na akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Ndị sunflower osisi semiology maara nke ọma. Ifuru nke ka ụbọchị na -aga n'ihu na -achọkarị ụzọ anyanwụ, ka o wee nweta ụzarị ya nke ọma. Kedu ihe nnọchianya ka mma nke ndụ Ndị Kraịst!.
Ị hụla ka osisi a si atụgharị nnukwu ifuru ya na anyanwụ? Otu a sunflower si enye anyị nkuzi. Anyanwụ bụ isi iyi nke ọkụ na okpomọkụ. Anyị chọrọ ọkụ ka anyị dịrị ndụ, na -akpa agwa, na -emekwa ezi mkpebi. Iji nwee obi ụtọ ma nọrọ na nchekwa n'ime ụwa siri ike anyị chọrọ ọkụ.
Ebee ka anyị ga -enweta azịza nye mkpa anyị? N'ebe Chineke n'onwe ya nọ, site n'okwukwe. N'ezie, Chineke chọrọ inye onye ọ bụla ìhè na ịhụnanya, mana nke a ga -ekwe omume ma ọ bụrụ na anyị echigharịkwuru ya site n'aka Ọkpara ya Jizọs Kraịst. Ee, Jizọs bịara, ìhè nke ụwa ( Jọn 8:12 ) maka mmadụ niile, ìhè nke Chineke zitere, mere site n'ìhè nke bụ amara na eziokwu. Mgbe ọ natara ya n'ime omimi nke anyị, ọ na -enyefe anyị ndụ nke Chineke ka anyị na Onye kere anyị nwee ike nwee mmekọrịta ọhụrụ.
Jizọs kwuru, sị: Abụ m ìhè nke ụwa; onye na -eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga -enwe ìhè nke ndụ ( Jọn 8:12 ). Ka anyị ghara ịga n'ọchịchịrị ebighi ebi, nke dị anya na Chineke, ka anyị chigharịkwuru Jizọs.
Na anyị ndị kwere ekwe, ọ bụrụ na anyị na -eso Jizọs, anyị ga -ejegharị n'ìhè ya wee bụrụ ndị akaebe ya. Bible ọdọhọ ete: Mkpụrụ nke mmụọ nsọ dị n'ịdị mma niile, ikpe ziri ezi na eziokwu ( Ndị Efesọs 5: 9 ). Dịka okooko osisi sunflower na -ewepụta mmanụ, onye kwere ekwe nke na -elegide Chineke anya na -egosi agwa ya nke ịdị mma, ezi omume na eziokwu.
Ihe Akwụkwọ Nsọ Cardinal Red Card pụtara - Akara Kadịnal…
Ihe akwụkwọ nsọ pụtara nsị na nrọ
Ihe Raccoon pụtara na Bible
Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara ụlọ n'ime nrọ
Ihe na -esi ísì ụtọ nke Akwụkwọ Nsọ na Mkpa ime mmụọ ha
Ihe Akwụkwọ Nsọ Pụtara Banyere Mmiri Na Nrọ